Sceneries laga heli karaa Rikoooo aan ku dhawaaqay si toos ah, waa ay jiraan xal? (Win 7 / 8 +) Hawshani waxay ku shaqaysaa labada Prepar3D iyo FS2004.By default, FSX waxaa lagu rakibay «C: \_ faylasha Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft \_ 'Simulator Microsoft Flight Simulator…
Hawshani waxay ku shaqaysaa labada Prepar3D iyo FS2004.
Marka la eego, FSX waxaa lagu rakibay «C: \_ faylalka Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft \_ Microsoft Simulator X». Dhibaatadu waxay tahay in Windows 7 iyo 8 + ama xitaa Windows 10 aadan awood buuxda u lahayn faylasha gudaha «Microsoft Flight Simulator X», oo ka horjoogsanaya barnaamij inuu ku qoro faylka qaabeynta. Si aad u xalliso dhibaatadaas, u gudub «C: \_ faylka Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft», ka dibna samee midig midig guji faylka «Microsoft Flight Simulator X», dhagsii “Properties”, ka dibna ku dhaji meesha “Security” tab. Halkan, xulo «Users (xxxxxx)», ka dibna dhagsii «Wax ka beddelidda». Daaqadda hadda uun furan, mar labaad dooro «Users (xxxxxx)», guji «Kontarool buuxa», ka dibna «Wax ka beddelidda». Hadda, waa inaad dhagsato 'ok' oo Windows ayaa cusbooneysiin doonta rukhsadaha.
Tilmaamaha in images hoos ku qoran:
Tilmaamaha ayaa laga arki karin isugeynta 'B777'. Maxaan sameeyaa? (FSX/P3D) Cabbirka Boeing777-300.gau, oo asal ahaan loo abuuray FS2004, kama shaqeeyo gudaha FSX iyada oo aan DLLT gaar ah loo xalin dhibaatadan, waa inaad…
eeg The Boeing777-300.gau, oo asal ahaan loo abuuray FS2004, kuma shaqeynayo FSX oo aan lahayn DLL gaar ah
Si loo xalliyo dhibaatada this, aad leedahay si aad nuqulka iyo paste DLL «ah msvcr70.dll »Gudaha FSXFeylka ugu muhiimsan (C: \_ faylalka Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft \_. Duulaanka Microsoft ee Duulista X). Haddii aad leedahay isla arrinta Prepar3D, xalkaan sidoo kale waa inuu shaqeeyaa. Si kastaba ha noqotee, maanaan isku dayin arrintaas P3D.
« msvcr70.dll »Waxaa laga heli karaa for free halkan: http://www.fichier-dll.fr/msvcr70.dll,2740,2740
Qaar ka mid ah add-ons waa mid hufan ama cawl (oo aan jir lahayn). Maxaan sameeyaa? (FSX SP2 / Xawaareynta) Wax muhiim ah, marka aad leedahay add-on kaas oo 3D loo sameeyay FS2004 laakiin loo adeegsaday FSX SP2 (oo sidoo kale loo yaqaan…
Wax muhiim ah, marka aad leedahay add-on kaas oo 3D loo sameeyay FS2004 laakiin loo adeegsaday FSX SP2 (oo sidoo kale loo yaqaan Port Over), waa in laga takhaluso Hordhaca DirectX 10 ee dejimaha FSX. Xaqiiqdii, FS2004 addons lama jaan qaadi karaan DirectX 10.
Tusaale 1: Koox ka mid ah diyaarad uu yahay aan la arki karin.
Tusaale 2: baalashoodu haddii diyaarad ay yihiin aan la arki karin.
Tusaale 3: diyaarad waa gebi cirro, oo aan dareen taabasho.
Xalka: Barkinta eegis DirectX 10.
Diyaaradaydu waa kacdaa markaan bedelo aragtida. Maxaan sameeyaa? (FSX) Qaar ka mid ah diyaaradahaaga ayaa ku soo boodi doona tarmac, isla waxaasuna waxay u dhacaan baabuurta ku wareegsan: taasi waa bug caan ah, ...
Qaar ka mid ah diyaaradahaaga ayaa ku soo dhacaya wadada laamiga, isla wixii la mid ahna waxay ku dhacaan baabuurta hareeraheeda: taasi waa cayayaan caan ah, oo lagu xallin karo iyadoo wax laga beddelayo "Go'aanka Mesh" ilaa ugu badnaan 5m. Xeerarka Muujinta ee FSX, guji tabka 'Scenery' tab oo beddel xalka sida hoos ku cad:
FSX wuu burburayaa markii uu ordayo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10-64 duulimaad lacag la’aan ah iyo fadhiyada fadhiyada MP. Ma jiraan wax hagaajin ah? Arrintani waxay ku taagantahay labo tallaabo oo fudud: Tallaabada 1: Download UIAutomationCore.dllStep 2: Furan faylka ZIP oo geli ...
Arrinta fadhiya laba talaabo u fudud:
1 Step: Download UIAutomationCore.dll
Tallaabada 2: Fure faylka ZIP oo ku dheji UIAutomationCore.dll galkaaga FSX gal rakib meesha faylka fsx.exe degan. Hubi FSX ma ordo.
Ficilkan kadib, bilow FSX oo waxaad ka heli doontaa in aragtida la beddelo FSX, ugu dambeyntii sababa FSX inuu shil galo.
Hagaajin la'aan, FSX waad laalaan doontaa sidoo kale waxaa laguugu 'ballami doonaa' kulan cayaareed badan. Ha u isticmaalin noocyo kale oo UIAutomationCore.dll, maadaama noocani yahay nooca kaliya ee joojin doona shilalka.
Sidee si loo soo dajiyo FSX dusha Windows 8 / 8.1 / 10? Si aad u rakibto FSX (dhammaan noocyadii) Windows VNUMX / 8, raac tallaabooyinkan: 8.1- Ku rakib FSX sida caadiga ah leh DVDs.2- Marka…
Si aad u rakibto FSX (dhamaan noocyada) Windows XP-ka ah 8 / 8.1, raac talaabooyinkan:
1- Rakibo FSX sida caadiga ah DVD-yada.
2- Markay rakibidu dhamaato, guji midigta « fsx.exe »(waxaad ka heli kartaa halkan: C: \_ faylalka Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft \_ Microsoft Duuliyaha Xaraashka X). Halkaan, dooro tababbarka 'Dhigashada' iyo jaangoow daaqadda sida hoos ku muuqata:
Download 3- 32 jajabkii version of « UIAutomationCore », Fur ka faylka oo ku dhex dheji FSXFuraha ugu weyn (C: \_ faylalka Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft \_ 'Microsoft Duuliyaha Xulashada X \_). Waxay sixi doontaa dhibaatada shilalka lama filaanka ah ee FSX.
Haddaba, talaabooyinkan yar kadib, FSX waa inay ahaato degganaan Windows 8 / 8.1 iyo 10
Waa maxay FSX SP1 iyo SP2? SP waxay u taagan tahay Xidhmada Adeeg 1 ama 2, kuwaas oo balastarrada la wanaajinayo FSX. Waa la heli karaa ka dib ciyaarta la siidaayo.Flight Simulator…
SP waxay u taagan tahay Xidhmada Adeeg 1 ama 2, kuwaas oo balastarrada la wanaajinayo FSX. Waa la heli karaa ka dib ciyaarta la sii daayo.
Adeegga X Flight Qabille Pack 1 (Click to download) Canaanto arrimaha soo socda helay by macaamiisha ka dib markii la sii daayo ciyaarta ee:
• Tababarka iyo Rakibaadda
• Dhibaatooyinka lala isticmaalka qaybaha dheeraad ah
• Hagaajinta waxqabadka
• Dhibaatooyinka lala content
Adeegga X Flight Qabille Pack 2 (Click to download) Hagaajinaysaa hawlaha soo socda:
• multiplayer waafaqid
Waxaad si loo soo dajiyo Pack Adeegga 1 (SP1), ka hor mid ka mid ah labaad.
Sideen ku ogaan karaa taas FSX nooca ayaa lagu rakibay kumbuyuutarkeyga? FSX-SP1, SP2 ama Dardar gelinta? Si loo ogaado nooca FSX lagu rakibay kumbuyuutarkaaga, way fududahay: Bilow FSX, oo duullimaad ka bilow meel kasta oo aad…
Si loo ogaado nooca FSX lagu rakibay kumbuyuutarkaaga, way fududahay: Bilow FSX, oo duulimaad ka bilow meeshii aad rabto, diyaarad kasta oo aad rabto. Hadda, sare ee shaashaddaada, ka fur bar bar tilmaameedka (haddii aan horey loo furin) oo guji 'Caawimaad' dhinaca midig. Halkan, guji «About». Daaqadda soo socota ayaa ku soo muuqanaysa noocaagii FSX:
Sida gabi ahaanba loo rakibo Rikoooo add-on ? All add-ons Rikoooo waxaa laga soo rogi karaa si la mid ah: Tani waxay ka shaqeysaa Windows Vista, 7, 8 iyo 10.On…
All add-ons ka Rikoooo waxaa loo rogi karaa si la mid ah:
Tani waxay ku shaqaysaa Windows Vista, 7, 8 iyo 10.
On desktop-ka, riix «ah Start Menu », Ka dibna on« All Programs »Oo taga si« ah Rikoooo Add-ons »
galka. Markaad gujiso, waxaad ka heli doontaa liiska add-onyou've waxaad ku rakibtay kumbuyuutarkaaga. Hadda, adiga uun
u leeyihiin in ay doortaan mid ka mid ah aad rabto in aad uninstall.
Habka kale, ka Control Panel ee Windows dooran Barnaamijyada iyo Features hadda idin arko liiska dhammaan barnaamijyada aad ku rakiban, ka dooro mid ka mid ah aad rabto in aad uninstall.
Halkee waa buugaga, ReadMe.txt, Copyright iwm? Laga soo bilaabo auto-installers version 10 ama + dhammaan dokumantiyada waxay ku yaalaan Folder My Documents ama Dukumentiyada ku saleysan Windows-gaaga ...
From auto-xidhaba version 10 ama + dhan qoraallada ku yaalaan Dukumentiyadayda folder ama Waraaqaha ku salaysan aad version Windows.
Raac tallaabooyinka ka auto-rakibayo ka hooseeya version 10:
On desktop-ka, riix «ah Start Menu », Ka dibna on« All Programs »Oo taga si« ah Rikoooo Add-ons »Galka Markaad gujiso, waxaad ka heli doontaa liiska add-onyou've waxaad ku rakibtay kumbuyuutarkaaga.
Habka Ohter, waxaad ka heli doontaa dukumiintiyo dukumiinti ah oo kujira galka galkaaga add-ons, tusaale: C: \_ Faylasha Barnaamijka (x86) \_ Ciyaaraha Microsoft \_ Microsoft Dhoola-tusaalaha Duulimaadyada Microsoft \_ Xulka Diyaaradaha \_ XXXX \_
Ma heli karo sanduuqa «Hordhac DirectX 10» ee ku yaal goobaha FSX. Maxaan sameeyaa? Marka hore, hubi inaad haysato FSX-SP2 lagu rakibay kumbuyuutarkaaga. Runtii, «Horudhaca DirectX 10» wuxuu kaliya muuqdaa haddii aad…
Marka hore, hubi inaad haysato FSX-SP2 lagu rakibay kumbuyuutarkaaga. Runtii, « Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh DirectX 10 »Waxay soo muuqanaysaa oo keliya haddii aad dhejisid qalabka 'SP2' ama haddii aad leedahay FSX Dardar-gelinta ama FSX Dahab ama FSX Daabacaadda Steam.
Hoos waxaad kala soo bixi kartaa labada jaamaha
Download SP1 ah
Download SP2 ah
Qaar ka mid ah aaladaha aasaasiga ama saamaynta la la'yahay. Maxaan sameeyaa? Marka wax badan oo isbadal ah lagu sameeyo "Gauge" folder, waxaa badanaa qayb ka mid ah ...
Markii wax badan oo ka badal ah lagu sameeyo galka '' Gauge '', waa ku soo noqnoqda in qayb ka mid ah faylalka salka ay ka maqan yihiin. Xaaladaas, haddii a add-on wuxuu ubaahanyahay feylasha, ma awoodo inuu ku muujiyo tilmaamaha gudiga. Inta badan xalka wuxuu ka kooban yahay dib u soo saarista FSX. Si looga fogaado dib u soo kicinta FSX, waad soo dejisan kartaa eeg Ladnaansho, Taas oo ah in yar oo barnaamij abuuray by Rikoooo in soo celin doonaa file kasta oo asal ka soo «aaladaha» iyo «Raadka» fayl.
Cusboonaysii 13 / 02 / 2014: A Prepar3d nooca ayaa la abuuray.
Prepar3D v2 iyo v3: Biyaha ka yimid meelaha qurxinta iyo xeebaha waa mid mugdi ah, ma arko biyo nadiif ah Dhibaatadan waxaa sababay firfircoonida waxqabadka Qalabka 'Hakinta Qalabka' ee qaabeynta garaafka Prepar3D v2 ama…
Dhibaatadaan waxaa keena hawshooda u ah ee shaqada Tessellation hardware qaabeynta garaafka ee Prepar3D v2 ama v3.
Halkan waa is barbardhig la muuqaal Seychelles Photo Pack Muuqaalka sheedda Real avalaible halkan :
Iyadoo Hardware Tessellation karti
Aan Hardware Tessellation karti
Sida ku cad barbardhigo kor ku xusan, naafada shaqada Tessellation hardware xaliyo dhibaatada.
Deacsiga ka dib waa inaad dib u bilowdaa Prepar3D si xalku u dhaqan galo.
Muuqaallada baaritaanka si otomaatig ah looma adeegsan karo Prepar3D v4. Waxaan helaa farri khalad ah markaan furayo P3D Isticmaalayaasha cusub Prepar3D v4: Kadib isbadal ku yimid iskuulada Scenery.cfg ilaa UTF-16LE auto-rakibayaashu mar dambe ma awoodsiin karaan…
Isticmaalayaasha cusub Prepar3D v4: Ka dib isbadal ku yimid iskuulada 'Scenery.cfg' ilaa UTF-16LE auto-rakibayaashu mar dambe ma awoodsiin karaan muuqaalkaaga muuqaalka.
Xalka kumeelgaarka ah: Furi faylka C: \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D v4 ka dib fur faylka Scenery.cfg oo leh notepad ka dibna guji Faylka - Badbaadi Sida ... Daaqadda furitaanka xulo UTF-8 duurka ku jira Encoding (fiiri sawirka hoose) oo guji Save.
Qalabkaan waa in lagu celceliyo muuqaal kasta oo rakibaadda maxaa yeelay P3D dib u keydi faylka Scenery.cfg ee UTF-16LE kadib furitaan kasto.
Marka aan guji badhanka badhanka waxba ma dhacaan, maxaad samaynaysaa? Waad sugeysaa, laakiin waxba ma dhicin, faylka laguma soo koobi karo, laga yaabo in aad dhowr daqiiqo sugto oo aad hesho qalad ...
Sidee loo diiwaan on aniga igu xisaab? Xaqiiqdii waa lagama maarmaan in la galo koontadaada si loogu raaxeysto dhammaan adeegyadeena iyo xawaaraha Jumbo. Si…
Xaqiiqdii waa lagama maarmaan in la galo koontadaada si loogu raaxeysto dhammaan adeegyadeena iyo xawaaraha Jumbo. Si aad tan u sameyso, waxaad ka heli doontaa qayb ka mid ah shaashadda korkeeda shaashadda ugu hooseysa ee bogga kasta ee websaydhka. Waxa kale oo aad ka gali kartaa warbaahinta bulshada ee aad jeceshahay sida Facebook.
Soo gal magacaaga isticmaale (ama cinwaanka emaylkaaga) iyo eraygaaga sirta ah ee aad adigu dooratay markii aad xubin noqotay.
Ka dib markii lagu guulaysto login:
Sida loo beddelo-ery? Waxyaabaha ugu horeeya ee la sameeyo waa inaad gasho xisaabtaada adoo adeegsanaya habka muraayadaha u dhiganta xagga sare. Guji ...
Waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in ay gasho in aad xisaabta la isticmaalayo module connexion to top ah. Riix «Edit my account».
Hadda, aad u leeyihiin in ay laba jeer geli password cusub, ee beeraha hoos ku qoran. Markaas, riix «Gudbi» si loo badbaadiyo beddelka ah.
Waan illoobay aan password iyo / ama aan username. Maxaan sameeyaa? Haddii aad illowday ereyga sirta ah iyo / ama magacaaga isticmaale, waxaa jira qalab aad isticmaali kartid si aad u soo qaadatid macluumaadkan: Waxaan illoobey ...
Haddii aad aad illowday password iyo / ama aad username, waxaa jira qalab aad u isticmaali karto in dib u soo ceshano Xog kuwan:
Waxaan illoobeen password
Waxaan illoobeen username
Haddii aad weli ma ka heli kartaa xisaabtaada, nala soo xiriir si aan ka dhigi kartaa beddelka loo baahan yahay: Nala soo xiriir.
My Times Jumbo waxaa firfircoonaan, laakiin download xawaaraha ayaa weli xadidan - Marka hore, hubso in jumlada "Jumbo OK" la dhigo dhinaca sare ee website-ka ...
- First, hubi in statut «ah OK Jumbo »Waxaa la dhigayaa dhinaca midig ee bogga internetka ee hoos ku qoran:
Haddii aad aragto «- Statut: No Jumbo », In micnaheedu Times Jumbo aan firfircoonaan. Isku day in aad ugu xidhmaan in aad xisaabta, la isticmaalayo «gal baxay» button. Waa in aad dhaqaajiso aad Times Jumbo.
- Haddii aad aragto xeerka « OK Jumbo », Laakiin xawaaraha aad qaadatay ma aha mid ka sarreeya 220ko / s, ka dibna hubi in bandwidth aan la yareeynin barnaamijyo kale oo isku dayaya in ay isla soo qaadato.
- Ka dib marka aad ku shaqeysid Jumbo-gaaga fadlan hubi inaad dib u bilowdo imtixaanada aad hore u socotay, URL-yada Jumbo ayaa isbedelaya.
- Waa inaad sidoo kale hubisaa in isku xirnaantaada internetku ay kuu ogolaanayso inaad sameyso xawaaraha sare. Waxay noqon kartaa lagama maarmaan in la sameeyo imtixaan kombiyuutar kale iyo isku xirnaan internet oo kale si loo hubiyo in dhibaatadu ka timaaddo kombuyuutarkaaga.
- Si kor loogu qaado aad ka soo dejisan xawaaraha ugu badnaan, waxaan kugula talineynaa in aad soo dejisan iyo rakibi FlashGet, kaas oo ah barnaamij lacag la'aan ah jidaynayey aad u badsado kor xawaaraha download si jeer 10. Halkan ayaad ka heli kartaa: http://www.flashget.com
Suurtogal ma ahan in la galo, xitaa haddii la adeegsado magaca sirta ah iyo erayga sirta ah, waa maxay xalka? Waxaan u soo qaadanay isbeddelo badan iyo horumarino, taasi waa sababta ay mararka qaarkood u dhici karto in shaqada galitaanka aysan shaqeyn…
Waxaan u soo qaadanay isbeddelo badan iyo horumarino, taasi waa sababta ay mararka qaarkood u dhici karto in shaqada galitaanka aysan shaqeynin mar dambe. Tan waxaa u sabab ah isbeddelada qaar ee ku dhaca server-keena oo aan wali ka muuqan dhinacaaga.
Si taas loo xalliyo, si fudud uga saar cookies-yada ku xiran kulankaaga Rikoooo. Tan ayaad si otomaatig ah u sameyn kartaa adoo raacaya xiriirintan: https://www.rikoooo.com/fr/forum/user/delete_cookies Waxaa lagu weydiin doonaa luuqadda Faransiiska haddii aad rabto inaad ka saarto kukiyada, guji "Oui". Waad dhamaatay Hadda waxaad isku dayi kartaa inaad gasho. Kadib dhagsii iskuxirahan https://www.rikoooo.com/board si aad websaydhka ugu soo celiso Ingiriisiga.
Haddii aad wali hesho farriin qalad ah (in ka badan laba jeer) oo aad isku deyeyso inaad gasho ka dib xalka kore, ka dib waxaad u badan tahay inaad ilaaway macluumaadka gelitaankaaga.
Waxaa jira aalado aad isticmaali karto si aad dib uguugu soo noqoto koontadaada:
Haddii aadan wali heli karin koontadaada, nala soo xiriir si aan u sameyn karno wax ka beddellada lagama maarmaanka ah: Nala soo xiriir.
Khamiista Juun 25 by rikoooo